Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Internet Problems » Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem]
1 Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 25th January 2010, 8:07 pm
အကိုတို့ရေ gmail အကောငျ့ကို ဟကျခငျြလို့ ဘယျလိုလုပျရပါသလဲ ။
တဈခါမှ မဟကျဘူးလို့ပါ ။ စမျးလညျးစမျးခငျြပါတယျ ။
သိတဲ့လူရှိရငျ ကြှနျတျောကိုပွောပွကပြါ ။ ကြှနျတျောဟကျတကျရငျ သူမြားတှကေို ဒုက်ခမပေးပါဘူး ။
သိခငျြတာနဲ့ ကိုယျကိုယျကို ကာကှယျခငျြလို့ပါ ။
Last edited by Fox on 7th August 2011, 2:40 am; edited5times in total (Reason for editing : Topic Title Edited)
2 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 26th January 2010, 6:09 pm
အဲလိုလုပျရဘူးလေ။ လူဇိုး။ Gmail Acc ဆိုတာ လှယျလှယျနဲ့ရတဲ့ အရာဟုတျဘူး။
3 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 26th January 2010, 6:23 pm
ပထမဦးဆုံး Keylogger သုံး...ဒုတိယအနနေဲ့ Phishing လုပျ...တတိယအနနေဲ့ တော့.....လှတျအောငျပွေးတတျဖို့လိုပါတယျ...
4 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 26th January 2010, 7:00 pm
ကြှနျတျောရေးထားတာမှာ အဓိပါယျပါတယျ အလကားရေးတာမဟုတျဘူးနျော
5 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 26th January 2010, 8:20 pm
6 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 26th January 2010, 8:22 pm
7 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 26th January 2010, 8:46 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-06-01
နညျးလိုရငျ email လိပျစာပေးလိုကျပါ။
8 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 26th January 2010, 11:59 pm
Thura Kyaw Swar
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-12-02
ကြေးဇူးတငျခံရမှု : 27
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 117
ဟားဟား ကွညျ့ရတာ ပွဿနာတကျခငျြလို့နတေူ့တယျ
9 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 27th January 2010, 12:37 pm
samurai wrote: အကိုတို့ရေ gmail အကောငျ့ကို ဟကျခငျြလို့ ဘယျလိုလုပျရပါသလဲ ။
Software key logger ဒါမှမဟုတျ Hardware key logger တော့လိုမယျလေ
10 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 27th January 2010, 7:51 pm
ဂျီတော့ ပတ်ဝေါမေ့နေရင် လူများ အကောင့်ကို ခိုးချင်ရင်
> အခုနည်းက ကိုယ် လူတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်း ကိုတော်တော်လေးသိနေရင်
> အဲဒီလူရဲ့အကောင့်ကို တောင်ရအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်
> ပထမဦးဆုံး ဂျီတော့ဘောက်က Forgot your password? ဆိုတဲ့ လင့်လေးကို
> ကလစ်ခေါက်လိ်ုက်ပါခင်ဗျ ..
> အဲဒီအခါကျရင် အနောက်က နေ ဝင်းဒိုးတစ်ခုကျလာပါလိမ့်မယ်
> အဲဒီမှာ Password Assistance ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ မိမိပတ်ဝေါမေ့နေတဲ့
> အကောင့်ကိုရိုက်ထည့်ပါခင်ဗျ.. အဲဒီအခါကျရင် အင်္ဂလိပ်စာလုံးမညီမညာတွေနဲ့
> ဘောက်ကျလာလိမ့်မယ် အဲဒီ စာလုံးတွေကို အောက်က သူ့ဘောက်ထဲမှာပဲပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပါ
> ... အဲဒီအခါကျရင် ကိုယ့်အကောင့်စဖွင့်တုန်းက ထားခဲ့တဲ့ security
> မေးခွန်းကိုမေးလိမ့်မယ် အဲဒီမေးခွန်းကို ဖြေပေးလိုက်ပေါ့ အဲဒီအခါဆို
> မှန်သွားရင် သူက ကိုယ့်ကို ပတ်ဝေါအသစ်ထည့်ခိုင်းပါတယ် အဲဒီအခါဆိုရင်
> အကောင့်ကိုပြန်ရပါပြီ .. အဲဒီလိုမှမဟုတ် အကောင့်ကိုလူများဖွင့်ပေးလို့ security
> မေးခွန်းကို ဘာထားထားလဲဆိုတာကိုယ်ကမသိဘူးဆိုရင် ဂူးဂဲက ကိုယ်အကောင့်ဖွင့်တုန်းက
> ပေးတဲ့ secondary email အီးမေလ်းဆီကို စာပို့ပေးပါလိမ့်မယ် ကိုယ်က အဲဒီ
> secondary email အကောင့်မေလ်းကိုဖွင့်ပြီး အဲဒီမှာပါတဲ့လင့်လေးကိုဝင်လိုက်တာနဲ့
> သူက ပတ်ဝေါအသစ်ထားခိုင်းပါလိမ့်မယ် အဲဒီလိုမှမဟုတ် ကိုယ်က
> အဲဒီအကောင့်ကိုဖွင့်ထားတာ မဟုတ်လို့ ဒါမှမဟုတ်သိပ်ပြီး နားမလည်လို့ security
> မေးခွန်းရော secondary email မသိဘူးဘူးဆိုရင်တော့ ဂူးဂဲက
> ကိုယ်မေ့သွားတဲ့အကောင့်ကို Reset Password ကျအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါ အဲဒီ Reset
> Password ကျအောင်လို့လည်း အရင်အကောင့်ဖွင့်တုန်းကထားခဲ့တဲ့ security
> မေးခွန်းကို တတ်နိုင်သမျှ အနီးစပ်ဆုံးဖြည့်ပေးပါ အဲဒီအခါကျရင် အင်္ဂလိပ်စာလုံး
> မညီမညာတွေကိုဖြည့်ခိုင်းပါလိမ့်မယ် အဲဒီအင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေကို
> အတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ပေးပါ နောက်ဆုံးမှာ အဲဒီအကောင့်ကို ဂုးဂဲက Reset Password
> ဆိုပြီးလုပ်လိုက်ပါလိမ့်မယ် .. အဲဒီ အကောင့် Reset Password
> ကျသွားပြီဆိုတာနဲ့တစ်ပြိုင်တည်း အဲဒီမှာစာတွေကျလာပါလိမ့်မယ် ..
> To initiate the password reset process, please follow the instructions sent
> to your ******@gmail.com email
> ဆိုပြီး အင်္ဂလိပ်စာကြောင်းတွေအများကြီး ကျလာပါလိမ့်မယ် အဲဒီမှာ This Form ဆိုတဲ့
> လင့်လေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် အပြာရောင်လေးနဲ့ပါ အဲဒါလေးကို ကလစ်လိုက်ပါ မရ ရင်
> အဲဒီအခါကျရင်တော့ သူမေးခွန်းတွေကျလာပါလိမ့်မယ်
> အဲဒီမေးခွန်းတွေမှာကြည့်လိုက်ပါ အောက်လေးကိုနဲနဲဆင်းလိုက်ပါ An email address
> we can use to contact you ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတွေ့လိမ့်မယ် အဲဒီ မှာ ကိုယ်လက်ရှိ
> သုံးလို့ရနေတဲ့ အကောင့် ကို ရိုက်လိုက်ပါ ဥပမာ [You must be registered and logged in to see this link.] ဆိုပြီးတော့
> ရိုက်လိုက်ပါ ပြီးရင် အောက်ကိုထပ်ဆင်းလိုက်ပါ Describe the problem you're
> experiencing ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတွေ့လိမ့်ရလိ့မ်မယ် ကျွန်တော်ကတော့ I believe
> someone has taken over my account ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုရွေးချယ်ပါတယ်
> နောက်ပြီးတော့ အောက်ကိုထပ်ဆင်းလိုက်ရင် Product information
> ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ Do you use Gmail with this account?
> ဆိုတာကိုတော့မဖြစ်မနေ ရွေးပေးရပါလိမ့်မယ် အဲဒါကိုရွေးလိုက်ရင်
> ဘောက်တွေကျလာလိမ့်မယ် အဲဒီအခါကျရင် Gmail username နေရာမှာကိုယ်
> လိုချင်တဲ့အကောင့်ကို ( ပတ်ဝေါ မေ့နေတဲ့အကောင့်) ကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ
> နောက်ပြီးတော့အောက်ဘက်မှာ Most recent secondary email address နဲ့ Do you have
>averification code ဆိုတာကိုတွေ့လိမ့်မယ် အဲဒီအဆင့်ကိုကျော်သွားလို့ရပါတယ်
> ပြီးရင် အောက်မှာ Email addresses of up to five frequently emailed contacts
> ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ် အဲဒီမှာ ကိုယ်နဲ့ အရင်ချက်ခဲ့တဲ့ ဂျီမေလ်းယူဇာ ၅ ယောက်
> သုံးယောက်လောက်လည်းရတယ် အဲဒါကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ
> ယူဇာနိမ်းတွေကိုရိုက်ထည့်ရမှာနော် ( ကိုယ်က လူများအကောင့်ကိုခိုးချင်ရင်လည်း
> ဒါတွေသိထားမှရမှာနော် ) အဲဒီလိုရိုက်ပြီးတာနဲ့ အောက်မှာ အဆင့် ၄ ဆင့်ရှိသေးတယ်
> အဲဒါတွေကိုကျော်လို့ရပါတယ် အောက်ကိုထပ်ပြီးဆင်းလိုက်ရင် Other account
> information ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ် အဲဒီမှာ Account creation date ဆိုတဲ့နေရာမှာ
> အကောင့်စဖွင့်တုန်းက လ ရယ် ခုနှစ်ရယ်ကို ဖြည့်ရပါမယ် (တစ်ကယ်လို့ ကိုယ်က
> ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူရဲ့အကောင့်ကိုခိုးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ကို နဂိုတည်းက
> ဒီအကောင့်ကိုစသုံးတာ ကြာပြီလား ဘယ်တုန်းက စသုံးတာလဲဆိုပြီး
> နဲနဲမသိမသာမေးထားသင့်တယ် ဟီး ကျွန်တော့်အကျင့်တွေပြောပြနေတာ ) ပြီးရင်အောက်မှာ
> Last successful login date ဆိုတာကိုတွေ့လိမ့်မယ် အဲဒါက
> အကောင့်ကိုနောက်ဆုံးသုံးခဲ့တဲ့နေ့ရက်ပါ အဲဒါက တော့လွယ်မယ်ထင်တယ်နော်
> အဲဒါလေးဖြည့်ပြီးရင်တော့ အောက်မှာ Last password you remember ဆိုတဲ့
> စာတန်းလေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် အဲဒါလေးကတော့ အကောင့်ကိုသုံးခဲ့တုန်းက
> မှတ်မိသမျှထဲက ပတ်ဝေါ တစ်ခုခု ပါ ဟိုအရင်တုန်းက သုံးနေတဲ့
> ပတ်ဝေါဆိုရင်လည်းလက်ခံပေးပါတယ် အရေးကြီးတာက အဲဒီ ကိုယ်ထည့်တဲ့ပတ်ဝေါကို
> အကောင့်မှာ တစ်ခါတစ်လေသုံးဖူးရင်တောင်ရပါတယ်
> အဲဒါလေးကိုဘေးကဘောက်လေးထဲမှာဖြည့်ပေးလိုက်ပါ (မိန်းကလေးတွေက များသောအားဖြင့်
> သူတို့ရဲ့မွေးနေ့ဒိတ် ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းနံပါတ်တွေကို ပတ်ဝေါအဖြစ်ထားတတ်ကြပါတယ် )
> အဲဒါလေးကလည်း အကောင့်ကိုခိုးချင်တယ်ဆိုရင်တောင်
> အရေးကြီးတဲ့အချက်ထဲမှာထည့်ပြီးစဉ်းစားသင့်တယ်နော် ပြီးရင်တော့ အောက်ဆုံးမှာ
> Submit ဆိုတဲ့ခလုပ်ကိုပျော်ပျော်ကြီးနှိပ်လိုက်ပေတော့ ဘော်ဘော်တို့ရေ
> ပြီးရင်ကိုယ်ခုနဖြည့်ထားတဲ့ An email address we can use to contact you ဆိုတဲ့
> ခေါင်းစဉ်မှာ ဖြည့်ထားတဲ့ မေလ်းကိုဖွင့်ပြီးထိုင်စောင့်နေပေတော့ ကိုယ့်ဆီကို
> သိပ်မကြာခင်အချိန်တွင်းမှာ အများဆုံးနာရီဝက်အတွင်းမှာ ဂူးဂဲကနေ
> အီးမေလ်းတစ်စောင်ပြန်ဝင်လာပါလိမ့်မယ် Subjcet က တော့
> Re: [#????????] I can't access my account ဆိုပြီးကိုယ့်ဆီကို အီးလ်မေး
> ပြန်ဝင်လာပါလိမ့်မယ် အဲဒီအီးလ်မေးလေး ကိုဖွင့်လိုက်ရင် ပထမဆုံး အကြောင်းမှာပဲ
> [You must be registered and logged in to see this link.] ဆိုတဲ့လင့်လေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်
> ( အဲဒါလေးကိုမတွေ့ရင် တော့ လုံးဝမရပါဘူး
> ထပ်ပြီးမေးခွန်းတွေမှန်အောင်ကြိုးစားလိုက်ဦးပေါ့ )အဲဒါလေးကို ကလစ်ပေးလိုက်ရင်
> Password Assistance ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဘောက်တစ်ခုကျလာပါလ်ိမ့်မယ်
> အဲဒီဘောက်မှာ ကိုယ်ခုန ပတ်ဝေါလိုချင်တဲ့
> အကောင့်ယူဇာနိမ်းကိုပြန်ရိုက်ပေးလိုက်ပါ အဲဒီအခါကျရင် အင်္ဂလိပ်စာလုံး မညီမညာနဲ့
> ကုဒ်တွေပြန်ရိုက်ခိုင်းပါလိမ့်မယ် အဲဒါကိုပြန်ရိုက်ပေးလိုက်ပါ
> သူမြင်ရတဲ့အတိုင်း ပြန်ရိုက်ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင် အဲဒါရိုက်ပြီးတာနဲ့ temporary
> question? ဆိုတာ ကျလာပါလိမ့်မယ် အဲဒီ temporary question? အောက်မှာတွေ့လား
> Change your password by sending an email to your secondary address
> အဲဒီလင့်လေး အဲဒါလေးကို ကလစ်ပေးလိုက်ရင် ခုန က ကိုယ်ဖွင့်လို့ရတဲ့ မေးလ်ထဲကို
> ဂူးဂဲကနေ နောက်ထပ်တစ်စောင်ထပ်ပြီးပို့ပေးပါလိမ့်မယ် ..
> အဲဒီမေလ်းကိုဖောက်ဖတ်လိုက်ပါ Google Password Assistance
> ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဝင်လာမှာပါ အဲဒီအောက်မှာလင့်လေးတစ်ခုပါ ပါတယ် အဲဒါလေးကို
> ကလစ်လိုက်တာနဲ့ အိုကေပြီ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပတ်ဝေက် ကိုထည့်လိုက် ပေတော့ ဒါပေမယ့်
> ဒီနည်းက တစ်ခုတော့ရှိတယ်နော် သူ့ပတ်ဝက် အဟောင်းကိုမသိရပါဘူး ကိုယ်က
> သူ့အကောင့်ကို အပြောက်ရိုက်လိုက် သလိုဖြစ်နေမှာပါ ဒီလိုနည်းနဲ့
> ကိုယ့်အကောင့်မေ့နေရင်လဲပြန်လည် ဖော်ယူလို့ရပါတယ် …
.ဒါပေမယ့် လူများအကောင့်ကို ခိုးတာတော့မကောင်းပါဘူး ဂျီမေးအကောက်တွေက ပေါပါတယ်
အတတ်နိုင်ဆုံး မလွှဲသာမှသာလုပ်ကြပါ ..
တစ်ကယ်လို့မ ရ ရင် ကိုယ်လုပ်တာတစ်ခုခုမှားနေလို့ပါ
> မေးခွန်းတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံးမှန်အောင်ပြန်ဖြေကြည့်လိုက်ပေါ့
ကိုယ်က ပတ်စ်ဝေါ့ကို Forgot ကနေသွားမယ်ဆိုရင် အဲဒီ့အကောင့်တစ်ခုဟာ ၂၄ နာရီအတွင်းမှာ active မရှိဘူးဆိုရင် security question ကိုတန်းဖြေပြီး reset ချလို့ရပါတယ်။ဒါပေမယ့် active ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ secondary email ဆီကိုတန်းသွားပါလိမ့်မယ်။အဲဒါဆိုရင် ဟိုဘက်က သူ့အကောင့်ကို တစ်ယောက်ယောက်မကောင်းကြံနေပြီလို့သိသွားပါလိမ့်မယ်။
11 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 27th January 2010, 7:57 pm
များပြားလိုက်တာ... သူများ ဟာခိုးချင်ရင်တော့ Phishing လိုမျိုးလေး Keylogger လိုမျိုးပဲသုံးတော့မယ်...အပေါ်က လိုအပင်ပန်းခံတော့ဝူး
12 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 27th January 2010, 8:14 pm
အခုလိုပြောပြတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
ဒါပင်မဲ့ အများကြီးလိုက်လုပ်ရမှာဗျာ ။ နည်းတာမဟုတ်ဘူး ။
လွယ်တဲ့နည်းလေးမရှိဘူးလား မစကျပါဗျာ ။
software သုံးရင် အဆင်မပြေဘူးလားဗျ ။ အဲ့ဒါဆို အဲ့လောက်မများဘူးလို့ထင်တယ် ။
software လေးရှိရင် မျှပါအုံးနော် ။ စမ်းချင်လို့ ပါ ။ ကာကွယ်ချင်တာလည်းပါတာပေါ့နော် ။
13 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 27th January 2010, 8:16 pm
samurai wrote: အခုလိုပြောပြတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
software ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးကိုပြောတာလဲခင်ဗျ....??? Keylogger လား?
14 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 27th January 2010, 11:20 pm
ကျွှန်မသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ Account ကို Hack လုပ်ပေးစေလိုပါတယ်ရှင့်
သူကကျွှန်မကိုစိန်ခေါ်ထားလို့ပါ။သူ့ရဲ့လိပ်စာကတော့ [You must be registered and logged in to see this link.] ပါရှင့်၊ ကူညီပေးစေလိုပါတယ်ရှင့်
15 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 28th January 2010, 6:30 am
16 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 28th January 2010, 9:33 am
ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲ ၊ Keylogger နဲ့လုပ်လို့ရရင်လဲ အဲ့ဒါလေးမျှနော် ။
17 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 28th January 2010, 3:57 pm
Edited by $ƴǩǾ
Personal ကိစ္စဖြစ်သဖြင့် PM ဖြင့်သာ ဆက်သွယ်ကြရန်။
18 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 28th January 2010, 4:48 pm
19 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 28th January 2010, 6:49 pm
အင်း....ခိုင်းတဲ့သူကလဲ ခိုင်းတယ် ၊ လုပ်တဲ့သူကလဲ လုပ်တယ် ၊ ပြီးတော့လဲ လူမြင်သူမြင်မှာ တင်ပေးတယ် ။ :sad
20 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 28th January 2010, 7:27 pm
ကျနော် လုံးဝ လုံးဝ လေးစာတယ်ဗျာ
21 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 28th January 2010, 8:44 pm
22 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 28th January 2010, 8:49 pm
23 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 30th January 2010, 6:05 pm
တညျနရော : root@127.0.0.1
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 32
Thura Kyaw Swar wrote: အင်းသုံးတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုပေးလို့ရပါတယ်
[You must be registered and logged in to see this link.] ကို hack ပေးစမ်းပါ။
အဲဒီအကောင့်ကို ညီလေး hack နိုင်ရင် ညီလေးကို 50000 kyats ပေးမယ်။
ပြီးတော့ ညီလေးကိုလည်း ဆရာကြီးလို့လည်း ခေါ်မယ်။
(မလုပ်ချင်ဘူးလို့တော့ အကြောင်းပြချက်မပေးနဲ့နော်... don't 4get hacking isachallenge)
ညီလေးကို အထင်ကြီးလို့ အကူညီတောင်းတာ သေချာ hack ပေးပါနော်။
24 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 30th January 2010, 7:30 pm
25 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 30th January 2010, 7:50 pm
User ကကျွှန်တော်ကိုယ် Accept လုပ်လိုက်တာလဲပါပါတယ်
26 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 30th January 2010, 8:35 pm
cain ကိုသုံး ဆိုတာဘယ်သူကိုပြောတာလဲဟင်
27 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 30th January 2010, 8:37 pm
satsoepiang wrote: cain ကိုသုံး
သုံးနည်းလေးပြောပြပါလားအစ်ကို...ကျွန်တော့်တုန်းကတော့ cain ကို keylogger သဘောမျိုးပဲ သုံးဖူးတယ်...ကျန်တာ ကမသုံးတတ်လို့မသုံးဖူးဘူး...
28 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 30th January 2010, 8:40 pm
HACKING GMAIL 2009 eB
29 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 31st January 2010, 10:13 am
အော်။ ဒီ Post လေးက ဒီလောက် အဆင့်ထိတောင်ရောက်သွားပြီလား။
ကျွန်တော့်အထင်တော့ Trojan သုံးတာမဟုတ်လောက်ဘူး။
Fake Software တစ်ခုခုနဲ့ အဲဒီ့ User ကို SE သုံးပြီးတော့ ယူထားတာလို့ဘဲမြင်ပါတယ်။
ကို sp1der ကလည်း နောက်ရဘူုးလေ။
သူက အဲဒီ့နည်းသုံးရင် ၊ အစ်ကိုက ဘယ်လိုလုပ်ခံရမှာလဲနော့်။
သူသုံးတဲ့နည်းက အသိတရားရှိတဲ့သူတွေ မခံရပါဘူး။
30 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 31st January 2010, 12:31 pm
31 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 3rd February 2010, 8:22 pm
အချိန်ရမှ Gmail Pw တွေ ကို အလွယ်တကူ ဘယ်လိုခိုးကြတယ် ၊ ဘယ်လိုလိမ်ကြတယ် ၊ ဆိုတာ ရေးပေးမယ်။
ဘယ်လို Trojan မျိုးသုံးတာလဲဗျ။ ကျွန်တော့်အထင်တော့ ကို Opera ပြောသွားတာလည်း မှန်မလားလို့။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် Trojan သုံးတယ်ဆိုတော့ ကိုယ်တိုင်ရေးထားတာ ထင်တယ်။ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ အစ်ကိုနဲ့လည်း ဆွေးနွေးကြည့်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော့် Mail ကို Add ပေးလို့ရမလားဗျာ။
[You must be registered and logged in to see this link.] ပါ။
32 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 4th February 2010, 2:23 pm
Trojan ပါတယ်ဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားသွားပြီဗျာ... [You must be registered and logged in to see this link.] ပါ ရခဲ့ရင် ပိုက်ဆံကလည်းသိပ်မချမ်းသာတော့ ဘီဘီ အ၀တိုက်ပါမယ် ( သောက်တတ်ရင်ပေါ့ )
33 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 5th February 2010, 7:10 am
kyawmin wrote: အင်း....ခိုင်းတဲ့သူကလဲ ခိုင်းတယ် ၊ လုပ်တဲ့သူကလဲ လုပ်တယ် ၊ ပြီးတော့လဲ လူမြင်သူမြင်မှာ တင်ပေးတယ် ။ :sad
Brother ကိုကျော်မင်း ပြောတာသဘောကျတယ်. (စိတ်ပျက်စရာကြီးပဲနော်.) ဘာလို့များ သူများ Mail Password ကိုသိချင်တာလဲ မသိဘူးနော်။
Gmail ကို Hack ချင်သူများက (Hack ချင်သူများနော်) နည်းလမ်းလေးပေးမယ်.နော်.
၁. အနီးဆုံး အုတ်တံတိုင်းကို သဘောင်္ဆေးနဲ့ (UPG) နဲ့ GOOGLE လို့ ကြီးကြီးရေးလိုက်. ပြီးရင် အဲဒီ အုတ်တံတိုင်းကို ခေါင်းနဲ့ အရှိန်ပြင်းပြင်းပြေးဆောင့်. :thinkagain
ပြိုသွားပြီဆိုရင် Gmail ကို Hack တော့ ချက်ချင်းရပြီ။
( မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ မဆိုလိုချင်၊ လွယ်လွယ်နဲ့တော့ မရနိုင်ပါ။) အာာ. ရှုပ်ပါတယ်. မရဘူးဗျာ.
34 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 5th February 2010, 8:09 am
သိသလောက်ကတော့ Gmail ကို Hack ဖို့နည်းလမ်းက သိပ်မများပါဘူး။
၁။ Phishing နဲ့ SE သုံးမလား။
၂။ Keylogger နဲ့ထောင်ဖမ်းမလား။ (Logger ကို Remote Install နဲ့ exe နောက်တစ်ခုထုတ်ပြီး Trojan Maker လိုကောင်မျိုးနဲ့ Trojan လုပ်မလား)
၃။ ရင်းနှီးတဲ့သူမျိုးဆိုရင် Security Question ကနေ၀င်မလား ။
၄။ အဲဒီထက်ပိုရင်းနှီးရင် Form ဖြည့်ပြီးယူမလား။ (ဒါကသိပ်တော့မလွယ်ပါဘူး။ Last Password တွေ, Account Creation Date တွေ, Mail Account5ခုတွေဘာတွေဖြည့်ရဦးမှာကိုး)
xss တွေ၊ sql injection တွေ၊ lfi တွေ၊ rfi တွေ (ကြားဖူးနားဝများ) အဲဒါတွေနဲ့ ၀ုန်းဒိုင်း ဆိုပြီး google server ထဲဝင်သွားနိုင်တာမျိုးကတော့????????????????????????????????????????????????
35 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 5th February 2010, 8:16 am
cookies stealing လုပ်မလား။
ပြီးရင် အဲဒီ cookies ကို ကိုယ့်စက်ထဲထည့်ပြီး သူ့မေးလ်ကိုဝင်မလား။ password သိဖို့၊ ပြင်ဖို့ တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
36 ဒီလိုလေး လုပ်ရင် ကောင်းမလား လို့ on 5th February 2010, 3:02 pm
ကျွန်တော် သိ သလောက် ပြောတာ ပါ
ဟတ်တာ က မလွယ် ဘူး ဗျ
လွယ်ရင် တော့ google ဆိုတာ က ဒေ၀ါလီခံ ဖို့ ပဲ ကျန်တော့ မယ်
user fault လေး တွေ ပေါ့
အဲဒီကနေ ပြီး password ရတာ ကို အချို့ တွေက ဟတ် တယ် လို့ ခေါ်ကြ တယ် ။
ဘာ လို့ အဲဒါကို ဟတ်တယ် လို့ ခေါ်ကြလဲ မသိဘူး။
ကျွန်တော် လဲ gmail password recovery နှင့် see password ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲလ် ထည့် ပြီး ကိုယ့် ကိုယ် ကို ဟတ် ကာလို့ ခေါ်ရင် ကောင်း မလား လို့စဉ်းစားနေတာ :doit :sry :sry
37 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 8th February 2010, 1:43 pm
zay wrote: ကျွန်တော် သိ သလောက် ပြောတာ ပါ
gmail အကောင့်ဟက်ဖို့က သိပ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ ။ gmail team ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ ကျော်ပြီး gmail ကို ဟက်ဖို့က မလွယ်လောက်ဘူးဗျ ။
gmail ကို ဟက်နိုင်တယ်ဆိုရင အဲ့လူက ဖိုရမ်တွေကို ဟက်ပြီး နှောက်ယှက်နေပြီပေါ့ ။ google ဆိုသာ မြန်မာနိုင်ငံက ပညာရှင်တွေမပါနိုင်ဘူးဗျ ။
ဖိုရမ်ဆိုတာက လူအနည်းစုနဲ့ အုပ်ချုပ်ထားတာ ။ google က လူအများကြီးနဲ့ အုပ်ချုပ်နေတာ ။ အဲ့ဒါကြောင့် ဟက်ဖို့ဆိုတာ သိပ်မလွယ် သလိုဘဲ
လို့တော့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာကို ချရေးလိုက်ခြင်းပါ ။ မည်သူ့ကိုမှ ထိခိုက်စေလိုခြင်း မရှိပါဘူး ။ အမှားပါရင် ခွှင့်လွှတ်ပါ ။ :rolleyes :rolleyes :rolleyes
38 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 8th February 2010, 3:10 pm
gmail ကို ဟက်နိုင်တယ်ဆိုရင အဲ့လူက ဖိုရမ်တွေကို ဟက်ပြီး နှောက်ယှက်နေပြီပေါ့ ။
forum တွေကို hack တာက gmail ကို hack တာထက် အများကြီး ပိုဖြစ်နိူင်ပါတယ် ၊ ဖြစ်နိူင်ခြေ ပိုများပါတယ် ။ ဖိုရမ်တွေကို hack နိူင်နေတဲ့ သူကလဲ gmail ကို hack ဖို့မလွယ်ကူနိူင်ပါဘူး ။ သဘောတရားချင်းလဲ မတူညီနိူင်ပါဘူး ။
39 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 8th February 2010, 6:26 pm
samurai wrote: အကိုတို့ရေ gmail အကောင့်ကို ဟက်ချင်လို့ ဘယ်လိုလုပ်ရပါသလဲ ။
တစ်ခါမှ မဟက်ဘူးလို့ပါ ။ စမ်းလည်းစမ်းချင်ပါတယ် ။
သိတဲ့လူရှိရင် ကျွန်တော်ကိုပြောပြကျပါ ။ ကျွန်တော်ဟက်တက်ရင် သူများတွေကို ဒုက္ခမပေးပါဘူး ။
သိချင်တာနဲ့ ကိုယ်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ချင်လို့ပါ ။
ဒါနဲ့သာဖဲ့ ဟဲဟဲ လျှောက်တော့မဖွနဲ့
ကျွန်တော်ဟာတော့ဟုက်ဘူးနော်[You must be registered and logged in to see this link.] ဟာ
40 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 8th February 2010, 6:47 pm
mg hack wrote: ဒါနဲ့သာဖဲ့ ဟဲဟဲ လျှောက်တော့မဖွနဲ့
ဟဟ။ ဒါလည်း ပညာပေးနည်း တစ်မျိုးပေါ့နော်။
41 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 8th February 2010, 7:22 pm
မှန်ပါတယ် ကိုကျော်မင်း ပြောတာ မှန်တယ်။
42 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 9th February 2010, 8:05 pm
test လုပ်လိုက် အုံးမယ်။
:doit :doit :doit :doit :doit :doit :doit :doit :doit :doit
43 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 3rd March 2010, 7:34 pm
Gmail အကောင့် ကာကွယ်နည်း ၊ ရယူနည်းများ ဆိုပေမယ့်..
44 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 3rd March 2010, 8:51 pm
ကာကွယ်နည်းကတော့လွယ်ပါတယ်.. PW ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ခပ်ရှုပ်ရှုပ်ပေးထား.. ပြီးတော့ အင်တာနက်ဆိုင်တွေကနေသုံးမယ်ဆိုရင် Task Mgr ကနေ Run နေတဲ့ prossess တွေကို တစ်ချက်လောက်စစ်ပေး.. ပြီးတော့ စိတ်မသန့်တဲ့ program တွေရှိရင် ပိတ်ပစ် ... ပြီးမှ သုံး ... အဲဒါအကောင်းဆုံး.. ဒီထက်ရှိသေးရင် ထပ်ပြောပေးဦးနော်..
45 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 4th March 2010, 9:24 pm
TWO TWO wrote: ခေါင်းစဉ်က
Clear Private Data And Registry Cleaning
U can do that ...
46 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 5th March 2010, 5:34 pm
အဲ့ဒါလေး စိတ်ဝင်စားတယ် အသေးစိတ်ပြောပြလို့ရမလား
ကိုလူပျိုကြီူး လုပ်ဘူးတယ် ကြားတယ် ဆက်လုပ်ရအောင် ... နော့
47 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 5th March 2010, 6:55 pm
ကာကွယ်နည်းဆိုတာ တကယ်တော့ နည်းနည်းလေးပိုလုံသွားအောင်ဘဲလုပ်နိုင်မှာပါ။ အဲလိုဘဲဗျ ခိုးတယ်ဆိုတာလည်း မလွယ်ကူပါဘူး။
ခိုးဖို့လည်း မလွယ်သလို ၊ ကာမယ်ဆိုရင်လည်း တော်တော်ခက်မှာပါ။
အခိုးခံရမယ့်သူက security နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မရင်းနှီးဘူး ၊ အကျွမ်းတ၀င်မရှိတဲ့သူမျိုးဆိုရင်တော့ ကိုယ်မသိလိုက်တဲ့ အချိန်မှာတင် ကိုယ့်ရဲ့ password ကို သူများဆီပေးလိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ (SE, Trojan(keylogger),.... )
Security ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နည်းနည်းရင်းနှီးတဲ့သူတွေတောင် ဟိုဘက်က ခိုးမယ့်သူက တော်နေရင်လည်း ပါသွားနိုင်ပါသေးတယ်။
နောက်တစ်ခု ခိုးမယ့်သူ ဘက်ကလည်း Gmail Server တစ်ခုလုံးကို ဖောက်ဖို့ဆိုတာ လွယ်လွယ်နဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလဲ။
ကိုယ်ခိုးချင်တဲ့သူရဲ့ password ကို ရဖို့တောင် မနည်းလုပ်ယူရမှာ(ဟိုဘက်က security ကို သေချာသိပြီး ၊ ဂရုတစိုက် အလုပ်လုပ်တဲ့သူ ဆိုရင် ပိုဆိုး၊။)
Link မြင်ရင် လက်အငြိမ်မနေဘဲ နှိပ်တာတို့ ၊ သူများပြောတိုင်း ယုံတာတို့ ၊ တစ်ဖက်သားကို အထင်ကြီးလွယ်တာ(မြန်မာနိုင်ငံသား အများဆုံး) တို့ နဲ့ အခြားအားနည်းချက်ဖြစ်စေတဲ့ စိတ်ဓါတ်လေးတွေ ၊ အကျင့်လေးတွေရှိနေရင်တော့ password အလုံး ၁၀၀ ပေးလဲ မလုံပါဘူး။ ကိုယ့်နဲ့ အနီးဆုံးနေတဲ့သူက ကိုယ့် password ကို ယူဖို့ အလွယ်ဆုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် အင်တာနက် စသုံးခါစကသာ ကျွန်တော့်ကို SE နဲ့ password ခိုးမယ့်သူရှိခဲ့ရင် ကျွန်တော့် အကောင့်တွေ အကုန်ပါနေပြီ။ (ခုတောင် တစ်ခါတစ်လေ သတိလက်လွတ် ဖြစ်တုန်း )
48 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 6th March 2010, 7:49 am
ဒီ post မှာအဲဒီစာကြောင်းပဲ့အမှန်ဆုံးပဲ့ဗျ
49 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 18th March 2010, 10:35 am
ကျွှန်တော် ကိုလည်းသင်ပါအုန်း ဗျာ အခု မှ I T အကြောင်းကို လေ့လာခါစ ဘဲ ၇ှိပါသေးတယ် ........။။တခြာ: hacking site တွေ သိသေးရင် မျှဝေပေးပါအုန်နော် အစ်ကို အစ်မ တို့ရေ
50 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem] on 22nd March 2010, 12:58 pm
မကောင်းဘူးဗျ နော့ ဟဲဟဲ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်လည်း ကြိုက်တယ် အဲဒါမျိုးတွေ များများသာမေး အားပေးတယ်
51 Re: Gmail အကောငျ့ ကာကှယျနညျး ရယူနညျးမြားသိပါက ဖွပေေးကွပါ [Problem]